Alcatel ga - ebupụta usoro 2018 ya niile na usoro 18: 9 | Akụkọ akụrụngwa
Alcatel ga-ebupụta usoro 2018 ya dum na usoro 18: 9
Elongated meziri bụ ebe a iji nọrọ n'etiti ndị ọrụ, a ogologo ihuenyo nke siri ike imeghari ka, ma mgbe a mgbe anyị na-atụle ihe nkịtị na anyị na-adịghị na-atụ uche nke wider meziri na ruo ugbu a ghọrọ predilection nke ọrụ.
Firmlọ ọrụ French Alcatel, nke mgbe ha gafesịrị aka dị iche iche n'afọ ndị na-adịbeghị anya, chọrọ ịbụ ihe ọzọ na ụwa nke telephony dịka ọ dị na ngwụsị afọ 90 na Alcatel One Touch na One Touch Easy nso, ka kwupụtara na niile ọnụ ulo oru na 2018 ga-enwe a ihuenyo format.
Companylọ ọrụ ahụ anaghị eme ka ndụ sie ike ma na-ezube ịmalite ụdị atọ iji kpuchie usoro niile dị ugbu a na ahịa: nke dị elu, nke dị ala na nke dị ala karịa mgbanwe. Alcatel 5 ga-abụ elu nke ụlọ ọrụ ahụ, ọnụ nke ga-enye anyị sistemụ ihu ihu yana igwefoto abụọ n'ihu mana agaghị agwakọta igwefoto azụ abụọ iji nwee ike iji mmetụta bokeh na gị foto, ya mere yikarịrị ka ọ ga-ekwe ka eme ya site na iji ngwaike, dị ka Pixel XL 2.
N'etiti etiti anyị hụrụ Alcatel 3v, ihe atụ dị n'etiti etiti dị elu na nke dị ala. Ngwaọrụ a ga - ejikọ ihuenyo na mkpebi HD zuru oke (2.160 x 1.080) ma ọ bụrụ na ọ ga - enwe igwefoto abụọ na azụ iji nye mmetụta bokeh, ihe o doro anya na ọ gaghị enwe ike ime site na ngwaike, mana ọ bụrụ nwanne m nwoke.
Na njedebe dị ala, Alcatel ga-enye Alcatel 1x, ọnụ ọgụgụ ntinye, nke ga-enwekwa ihuenyo na usoro 18: 9, mana yana mkpebi HD + dị ala (1.440 x 720). Firmlọ ọrụ French ahụ kwadoro na ngwaọrụ a ga-agụnye sistemụ mkpọghe ihu kama ọ ga-arụ ọrụ naanị site na ngwanrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Alcatel ga-ebupụta usoro 2018 ya dum na usoro 18: 9
Ntinye aka nke Alcatel na usoro 18: 9 nwere ihe ịga nke ọma.
Enwere m mmasị na imewe na njedebe nke ekwentị 3, yana ntinye nhọrọ dịka igwefoto abụọ na ihu ihu.
Nwere ike ịhụ mbọ nke ika iji gaa n'ihu ịsọ mpi, yana atụmatụ ndị mara mma na ọnụahịa dị mma.
Ana m achọ ama nwere ihe ngosi 18: 9 na nke ahụ bụ ihe jupụtara na ya, nke mere na ọ na-eguzogide ịtụnanya, achọtala m Blackview BV9000 Pro, nke m chere na ọ nwere ọnụahịa dị mma maka atụmatụ ndị o nwere, kedu ihe ị chere?
Samsung ga-emeghe ohere ịnweta mgbawa FM nke ngwaọrụ ya na United States na Canada